ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အရှိန်အဟုတ်မြှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေ
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အရှိန်အဟုတ်မြှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေ
လက်ပတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသူများအား သံဃာတော်များက တောင်းပန် . . .ဦးသန်းရွှေ၏ ဆိုးကျိုး များသည် နိုင်ငံတော်ကို ပြောင်းပြန်လှန်ရုံမက . . . ဘာသာတရားကိုပါ ပြောင်းပြန်လှန်ခဲ့ပြီလော .
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းတွင် ပြည်သူများ၏ မျက်ရည်ကို ခြေဆေးနေသော အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား အများပြည်သူ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် သံဃာတော်များ တောင်းပန်
ပုလဲ လွတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်လှိုင်နှင့်အတူ မုံရွာမြို့ Nld ပါတီဝင်များ လက်ပံတောင်းတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် တောင်းဆို ဆန္နပြသည့် သပိတ်စခန်းများအား သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေး
ပြည်သူလူထုကိုယ်စား ပြည်သူတွေအတွက် လွတ်တော်ထဲမှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးတဲ့သူကို လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်ဟုခေါ်သည်။
၂၅.၁၁.၂၀၁၂ ရက်နေ့ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းဖျက်သိမ်းပေးရေးအတွက် သံဃာတော်များ ကျောင်းသားများ တောင်သူလယ်သမား စုပေါင်း၍ ၀မ်ပေါင်ကုမ္မဏီရုံးရှေ့အ၀င်ပေါက်တွင် ပိတ်ဆို့ သပိတ်စခန်းတည်ထားကာ သပိတ်တိုက်ပွဲ ယခုအချိန်ထိ အရှိန်တိုးမြှင့် တိုက်ပွဲဝင်နေကြကြောင်း၊ ယနေ့ ပုလဲလွတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်နှင့် NLD ပါတီဝင်များသည် သပိတ်စခန်းသို့ လာရောက် ဆွေးနွေးကြပြီး ၂၉ ရက်နေ့တွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်..
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:10 AM